J-SAT General Services, Bogyoke Aung San Road, Room No.501, 5th Floor, Sakura Tower, Yangon (2021)
J-SAT General Services
No.1 Local Recruitment Agency for Japanese companies in Myanmar မြန်မာလုပ်သားများကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီသီးသန့်နှင့်သာ မိတ်ဆက်ပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်လူမျိုးတိုင်ပင်ခံဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ထားပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးခြင်း များလည်း လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ စုစုပေါင်း၏ ၈၅%ကျော် နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
✨ မင်္ဂလာပါ ✨
2021ခုနှစ် ဒုတိယမြောက်လ ရဲ့ ပထမဆုံးအပတ် တနင်္လာနေ့မှာ အိပ်မက်ကိုယ်စီရှိကြတဲ့ လူငယ်တွေအားလုံးအတွက် အရမ်းကောင်းမွန်တဲ့စကားလက်ဆောင်တစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်❣️
「夢はでっかく、根は深く」Big Dreams, Deep Roots ဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်🌳🌳
လူငယ်‌တွေမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ ကြီးမားတဲ့ အိပ်မက်တွေ ရှိကြပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့ အိပ်မက်တွေဆိုတာ သစ်ပင်တစ်ပင်လိုပါပဲ🌴အရိပ်အာဝါသကောင်းတဲ့ သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်လာဖို့နဲ့မပြိုလဲသွားဖို့အတွက် အမြစ်‌တွေမြေကြီးထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကုပ်တွယ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်💯
အဲ့လိုပဲ လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်စီထွေးပိုက်ထားတဲ့ အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါမှာ ရေသောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ကြိုးစားမှု၊ လုံ့လအားစိုက်ထုတ်မှုတွေက ခိုင်ခိုင်မာမာအမြစ်တွယ်ရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်💥အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် အမြစ်မခိုင်တဲ့သစ်ပင်လို အိပ်မက်တွေကပြိုလဲသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်⚠️
လိုအပ်တဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို အခြေခိုင်ခိုင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင် အိပ်မက်တွေ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ✅
Panosonic လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်သူ Mr. Matsush*ta Konosuke ဘဝဇာတ်‌‌ကြောင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြောပွဲ
၁၀နာရီ တိတိတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလက်ရှိ ခေါ်ယူနေတဲ့ General Position အတွက် အလုပ်ခေါ်စာများကို Link နဲ့ တကွ စုစည်းပြီးတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် Online Registration လုပ်ဆောင်ရန် လူကြီးမင်းများ၏ CV Form များကို [email protected] သို့ Email မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ပြီးလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အလုပ်ခေါ်စာ Requirements အသေးစိတ်ကို စုံစမ်းသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Phone No : 09-424263194 / 09-453890838 / 09-894175107 / 09-894175108
- Raise Your Dream With J-SAT -
(1) Marketing and CSV Executive/Manager Position (4990)
(2)Secretary / General affairs (4984)
(3)Relationship Manager (4976)
(4)Sr. Business Administrator (4972)
(5) PPIC (Production Planning & Inventory Control) Assistant Supervisor (or) Supervisor Position (4968)
(6) PPIC (Production Planning & Inventory Control & Interpreter) (4967)
(7) Analysts (Treasury Department) Position (4960)
(8) Office Staff Position (4948)
(9) Sales Leader (4940)
(10) Admin Manager Position (4788)
(11) Transaction Banking Position (4861)
(12) Senior Sales Staff Position (4866)
(13) Chief Administrative Officer (4813)
(14)Factory Manager (Japanese Speaker) (4988)
(15)Negotiator Position (5001)
(16) Real Estate Position (5013)
(17) Accounting Manager Position (5015)
(18) Finance and Account Staff Position (5016)
(19) Export and Import Staff Position (5017)
(20) HR Position (5018)
(21) Administration Management (PM Class) Position (5030)
(22) Management (Over supervisor level) (5033)
(23) Sale Admin & Logistic Supervisor Position (5037)
(24) Marketing Supervisor Position (5038)
(25) Assistant Manager Position (Product Pricing) (5041)
(26) General Manager Position (Accounting & Finance) (5051)
(27) HR & ADM Manager Position (5056)
(28) Administrator Position (5059)
(29) Sales Engineer (Instructor) (5061)
(30) Officer Position (5062)
(31) Assistant Accountant Position (5063)
(33) Interpreter (5066)
(35)Junior Accountant (5068)
(36)Finance Department Manager (5069)
✨ NOW HIRING ✨
ယခုလက်ရှိ ခေါ်ယူနေတဲ့ Engineering Position အတွက် အလုပ်ခေါ်စာများကို Link နဲ့ တကွ စုစည်းပြီးတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် Online Registration လုပ်ဆောင်ရန် လူကြီးမင်း များ ၏ CV Form များကို [email protected] သို့ Email မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Phone No : 09-445372604 / 09-441291864 / 09-453890837
(1) Civil Engineer (Japanese Speaker) (4978)
(2) ICT Engineer Staff Position (4824)
(3)Civil Engineer (Chief Class) (4979)
(4) Document Controller (4991)
(5) Safety,Health and Environmental Officer (4992)
(6) Site Engineer/QC (4993)
(7) Site Manager (4994)
(8) Interface Manager (4995)
(9) Factory Operator (4998)
(10)IT Engineer (4951)
(11) IT Assistant (5011)
(12) Construction Management (Senior Level) (5014)
(13) IT Manager (5019)
(14) Accessories Installation Team Leader (5020)
(15) Accessories Installation Staff (5021)
(16) Business Development (Manager Class) (5023)
(17) Assistant IT Solution Manager (5024)
(18) Solution Engineer (Cloud) (5025)
(19) GM (5031)
(20) GM sub-contractor (5032)
(21) Site Engineer (5040)
(22) Electrical or Mechanical engineer (5043)
(23) QA/QC Manager level (5045)
(24) Survey Manager (5048)
(25) QA (5049)
(26) HSE / Safety Manager (5050)
(27) Civil Engineer (5055)
(28)After Sales Manager (5053)
(29)Surveyor ( Assistant Level ) (5057)
(30)Service Technician/Engineer (AP) (5036)
(31) Administrator Position (5059)
(32)Service Engineer (Applied Product) (5060)
(33) Sales Engineer (Instructor) (5061)
Bogyoke Aung San Road, Room No.501, 5th Floor, Sakura Tower
Be the first to know and let us send you an email when J-SAT General Services posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Sendamessage to J-SAT General Services:
Matsush*ta Konosuke Book Online Seminar
Success Candidate Post
🤗 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင် 🤗 ဒီနေ့မှာတော့Engineeringကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ English speaker အနေနဲ့ Admin & HR Manager position နဲ့ အလုပ်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ candidate ရဲ့အမေးအဖြေ video clip လေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအလုပ်အတွေ့အကြုံတွေကနေ အင်တာဗျူးတစ်ခုဝင်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုရှင်းပြပေးထားတဲ့အတွက် ဗဟုသုတဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ရှင်😊😊 👇👇👇
🤗အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ 🤗 ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ 自分の努力を制限せずに、自分の限界に挑戦しましょう! "ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်မထားဘဲ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကို စိန်ခေါ်ကြည့်ရအောင် "ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။☺️ မလုပ်ဖူးသေးတဲ့အရာတစ်ခုခုကို လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် "မလုပ်တတ်ဘူး၊ မလုပ်ချင်ဘူး၊ လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊လုပ်မှမလုပ်တတ်တာ"လို့တွေးရင်းနဲ့🤔လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကန့်သတ်မိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာက လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် "ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရနိုင်မလဲ၊လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်"လို့ စဉ်းစားရင်း ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကို အဆုံးမရှိစိန်ခေါ်ကြည့်ကြရအောင်။🤩
ဒီတစ်လရဲ့ knowledge sharing အနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ပလတ်စတစ်အိတ်လျော့ချတဲ့ campaign တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၂၄နာရီဖွင့်တဲ့စတိုးဆိုင်တွေ၊ ကုန်တိုက်တွေမှာ ‌‌စျေးဝယ်တွေကို My Bag ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ယူလာပြီး စျေးဝယ်ပေးဖို့နဲ့ ပစ္စည်းထည့်တဲ့ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေကို အရင်လို အလကား‌ထည့်မပေးတော့တဲ့ campaignကို ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း စီးတီးမတ်တွေရဲ့ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ကောင်တာက တစ်ချို့ရက်တွေမှာ အိတ်မပေးတဲ့ activityလေးတွေ လုပ်တာမျိုးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီcampaign လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က3Rထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Reduce လျော့ချခြင်း ကို အဓိကထားတဲ့လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီcampaignမလုပ်ခင်က ၂၄နာရီဖွင့်တဲ့စတိုးဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်က ပလတ်စတစ်အိတ်မသုံးတဲ့လူက ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေကို အရင်လို အလကား‌ထည့်မပေးတော့တဲ့campaign စတင်ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လကစပြီး စျေးဝယ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ပလတ်စတစ်အိတ်ကို မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ပုံမှန် အလကားရနေကျအရာကို ပိုက်ဆံပေးရမယ်ဆိုတော့ ဝယ်ရလောက်တဲ့အထိ လိုချင်လို့လား လိုအပ်လို့လား လို့ တွေးမိကြတဲ့ပုံပါပဲ။ ပြီး‌တော့ ပလတ်စတစ်အိတ်အစားသုံး eco bag ကလည်း ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းနဲ့ လုပ်ထားတာပဲ လို့ စိတ်ပူတဲ့လူတွေက သဘာဝကုန်ကြမ်းကနေ လုပ်တဲ့ ချည်အိတ်နဲ့ ဖုရိုရှိခိ လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်စတိုင်အဝတ်စကို အိတ်ပုံစံလုပ်ပြီးသုံးလာကြပါတယ်။ ဖုရိုရှိခိက လေးထောင့်ပုံစံပိတ်စ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခေါက်ပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်သွားလို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကို လိုက်ပြီး အဆင်ပြေအောင် ချည်ပြီးသယ်ယူလို့ရတဲ့အပြင် ပြန်လျှော်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့အတွက် တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ဂျပန်ရိုးရာ ဖုရိုရှိခိကို အသက်၄၀ကနေ ၇၀ကြား အမျိုးသမီးတွေအသုံးများပေမဲ့ ယခုအခါမှာတော့ ပလတ်စတစ်အိတ်အစား အသုံးပြုလို့ရတာကို သိလာကြပြီး လူငယ်တွေကြားမှာလည်း စျေးဝယ်တဲ့အခါ ပစ္စည်းထည့်တဲ့အိတ်အနေနဲ့ သုံးကြတဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ ဖုရိုရှိခိလေးတွေကို ဂျပန်မှာ ထမင်းဘူး၊ တစ်ရှုးဘူးနဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ထုပ်ပိုးတဲ့အချိန်မှာလည်း အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ယခုလို ပလတ်စတစ်အိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် မသုံးဘဲ၊မလိုရင် အသစ်မဝယ်တာက ကုန်ကျစရိတ်ကိုသာမက အမှိုက်ပမာဏကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ ဖုရိုရှိခိချည်နည်းအများကြီးထဲက အိတ်ပုံစံဖြစ်အောင် အခြေခံချည်နည်းလေးတစ်ခုကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
🤗အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။🤗 ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ 自分の仕事を大切にしよう ဆိုတဲ့ "မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးလုပ်ကိုင်ကြပါ" 😍ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ 👨‍💼👩‍💼လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူမဆို မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်ပြီးရွေးချယ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေရှိသလို အခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် မဖြစ်မနေလုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါ။ 👩‍💻👨‍💻 😍အလုပ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့တန်ဖိုးကို ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာပါ။ ဘယ်အလုပ်မဆို အလုပ်တိုင်းကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အတွေ့ အကြုံတွေလည်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ကို တက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးနဲ့ တန်ဖိုးထားလုပ်ကိုင်ပြီး နေ့ရက်တိုင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဖြတ်သန်းကြရအောင်။ 🚶‍♂️🚶‍♀️
J-SAT သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်ရှာဖွေနေသူများကို အခကြေးငွေလုံးဝမယူဘဲ ဂျပန်ကုမ္ပဏီသီးသန့်နှင့်သာ မိတ်ဆက်ပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည် ။
ဖောင်ဖြည့်ခြင်း ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခြင်း ၊ အလုပ်မဝင်ခင် Pre-Interview ကို မြန်မာလို ၊ အင်္ဂလိပ်လို (ဂျပန်စကားရသူများအတွက် ဂျပန်လို) ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ မိမိ ဝါသနာ ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် အလုပ်အကိုင်ရှိပါက ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပေးခြင်း ၊ အလုပ်အတွက် Interview ဝင်ရန်စီစဉ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည် ။ ထို့ပြင် အလုပ်အကိုင်နှင့် ပက်သက်၍ ဂျပန်လူမျိုး ၊ မြန်မာလူမျိုး တိုင်ပင်ခံ ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ထားပြီး အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးခြင်း များလည်း လုပ်ဆောင်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
J-SAT ကုမ္ပဏီသည် ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ စုစုပေါင်း၏ ၈၅%ကျော် နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်းရရှိရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများကို J-SAT မှ တစ်ဆင့် ယခုပဲ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ ။
GMA Maritime Services
# 333, Ground Floor, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Tsp.
JobsGlobal.com Myanmar - ဟိန်းသစ္စာ
No. 144, Insein Road, Hlaing Township, Yangon
Connect Job Myanmar
The Keier Group Serviced Offices and coworking spaceNo. 561, 563, 565, 567 Merchant Street, #803
Beauty Diary Career
92A U Aung Kain Street, Bahan Township
HR Assistant _Freelance Recruiters
No 2, Room 6B, Pyi Yeik Mon Housing, Nar Nat Taw Street, Kamayut, near Kamayut Township Count
Pale Nadi Training Centre, Japanese Vocationa
1st Floor, 38th Street Plaza , Between 38th Street and Seikkanthar Street (Upper Block), Between Bogyoke Road and Anawrahtar Road, Kyauktada Tsp, Yangon
1101.11Fl Mahabandoola Road.
သုခစုစံ - Thukhasusan
39th Street, Merchant Road,
No.14, 88th Street, Mingalar Taung Nyunt Township
Chate Sat Freelancing Platform
#90 Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar
Myanmar Unity Employment Agency
Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137, Upper Pansoedan Road, Kan Myauk Ward, Mingalar Taungnyunt Township,
No (21/23), RM - (3/4) 52nd Street Botahtaung T/S
S.R Shipping - Myanmar Co., Ltd
Golden Gate Tower, Upper Pazundaung Road, Yangon, Republic of the Union of Myanmar
Other Employment Agencies in Yangon
Myanmar Job Navi
No439(M)-4F, The corner of Merchant rd. and 44th St.,
Active - အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း
No.48, first floor, 46 street, Botahtaung Tsp
96/B U Shwe Bin Street, Shwe Pyi Thar Industrial zone (4) , Insein township
MYINT MO PHU PWINT Agency
WEST BAHO STREET
Amazing Jobs Solutions
102. Bayint Naung Tower 2-A. Corner of Hledan Road and Kanner Road, Kamaryut Township
GOOD JOB Employment Agency
DUAL TECH Local Employment Agency
No.206/2, Yankin Main Road, Near Yoma Bank, Yankin Tsp. Yangon.
Pyae Job Local Employment Agency
Room No - 2/A 439,Muditar Housing - 2,Insein Township
Phoenix Job Agency
No.19, 153 Street,
Electrical Power နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အလုပ္ေတြမ်ား ရွိလားဗ် လူသစ္ပါ
ဘီအီး - မက္ကယ္နီကယ္ ဘြဲ႔ရျပီး ဂ်ပန္ မွာ အလုပ္သြားခ်င္ပါတယ္ ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ သိခ်င္လို႔ပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
security အလုပ္မေခၚဘူးလား ဘြဲ႕ရ ပါ အလုပ္လိုခ်င္ပါတယ္
We will notify you when anything happens in Yangon.